Asaivo mifanaraka amin'ny fampiharana ampiasainao amin'ny Status | Androidsis
Material Design dia afaka nanome endrika Android lehibe amin'ny famolavolana. Sarimiaina, bara fitoviana loko ny rindranasa na ny mampiavaka azy manokana, dia nanamboatra telefaona madio madio, tadiavin'ny mpampiasa maro. Na ireo efa niaraka tamin'ny iOS hatrizay aza, dia nahita ny kinova Android tsy misy fangarony, izay azo jerena ao amin'ny Nexus na Motorola, ho toy ny interface iray izay azo raisina tsara, tsy vitan'ny hoe miteny amin'ny hevitry ny endrika ihany.
Fa raha mandeha amin'ny telefaona Samsung na telefaona Xiaomi isika dia mahita capes mavesatra mavesatra ary iza no mitady fomba hafa hamoronana ny bara, ny sarimiaina ary ireo singa hafa mandrafitra azy ireo. Raha sendra telefaona mampiasa layer namboarina izay manakana ny bara misy ny tsy fisian'ny lokon'ny loko misy anao amin'ny toerana misy anao ianao, azo antoka fa mety aminao ilay app izay horesahiko.
1 Ny bara fananganana Material Design amin'ny fotony rehetra
2 Ahoana ny fomba hananana ny bara misy ny Android madio
Ny bara fananganana Material Design amin'ny fotony rehetra
Ka ho an'ireo izay manana fari-piainana izay tsy mifanaraka amin'ny lokon'ny fampiharana mavitrika na manana sariitatra sariitatra kokoa, ity fampiharana ity novolavolain'i James Fenn Ity dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hananana ny bara misy ny toerana misy anao ho an'ny Android. Ny ataon'ity rindrambaiko ity dia manampia ny tenany eo amin'ny tsipika fitadiavana mba hifanaraka amin'ny loko, manana ireo sary ho Design Material ary inona ny lohahevitra.
Ny tsara indrindra, ny fampiharana tsy mila tombontsoa ROOT, Ka na iza na iza dia afaka manandrana handresy lahatra ny tenany fa ny bara misy ny soso-kevitr'izy ireo dia manana kalitao ratsy kokoa noho ilay nentin'i Fenn an'ity fampiharana antsoina hoe Status ity
Ahoana ny fomba hananana ny bara misy ny Android madio
Hanavao izany bara fisehoana ratsy Miaraka amin'ny Material Design, ny zavatra voalohany dia ny fametrahana ity app eto ambany antsoina hoe Status ity:
Efa napetraka, rehefa mandefa Status aloha ianao dia misy a andiana fahazoan-dàlana fanampiny hahafahanao mametraka ny fampiharana eo amin'ny efijery ianao, mampiseho ireo sary fampandrenesana ary hitazomana tsara ireo mari-pamantarana ny fifandraisana. Ny rindrambaiko dia manana efijery fandaminana izay hitondra anao hamaky ity fizotrany manontolo ity, ka mora daholo izy rehetra. Tsy mila manome alalana amin'ireo alalana ireo ianao raha te ho vonona hampiasa ny fampiharana.
Miverina amin'ny efijery lehibe an'ny fampiharana ianao izao, tsy maintsy ampandehano ny "Status Bar Service". Hamarino tsara ihany koa fa ny safidy "Status Bar Coloring" dia mavitrika ka ny bara fananganana status dia manana loko mitovy amin'ny fampiharana ampiasainao. Raha toa ka tsy mandeha ny fampiharana ampiasainao na ny loko na ny loko dia azonao atao ny mamaritra ny loko misy anao izay hampiasaina amin'ireo toe-javatra ireo.
Manana safidy koa ianao raha mbola tsy mandeha ilay endri-javatra ny loko. Miverina eo amin'ny menio lehibe an'ny fampiharana izahay ary tsindrio ny «Add Apps». Eto ianao dia tsy maintsy manamarina ilay boaty eo akaikin'ilay rindrambaiko izay miteraka olana, ampiasao ireo mpikorisa amin'ny fikandrana mipoitra mba hanitsiana ny lokon'ny bara fitendrena an'io fampiharana manokana io.
Manomboka izao dia hanana ny bara misy ny Material Design ianao misy sary masina sy famantarana, ankoatran'io loko io izay ho fantatra tsara amin'ny fampiharana ampiasainao. Mazava ho azy, ny fanovana dia ampiharina amin'ny bara ihany, raha manitatra azy ianao dia ho toy ny fanao mahazatra anananao no manana azy. Rindrambaiko mahaliana iray noforoniny, novolavolaina mba hialana amin'ilay bara tsy mendrika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Omeo ny satan'ny toeranao ny loko sy ny sarin'ny endrika Android Material Pure